အရပ်သားတွေသေဆုံးမှုတိုးလာတဲ့ ရခိုင်တိုက်ပွဲ အပါအဝင် မနက်ခင်းသတင်းများ
အရပ်သားတွေသေဆုံးမှုတိုးလာတဲ့ ရခိုင်တိုက်ပွဲ အပါအဝင...
20 ต.ค. 2562 - 11:52 น.
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ ဖြစ်နေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေဟာ လူနေအိမ်တွေနဲ့ လူနေအိမ်ခြေ အနားတွေမှာဖြစ်တဲ့ အတွက် အရပ်သားသေဆုံးမှုဟာ တိုးလာသလို ရွာတွေကလည်း ထွက်ပြေးကြရတဲ့ စစ်ပြေးရှောင်
ဒေသခံတွေဟာလည်း တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ တိုးလာနေပါတယ်။
အခုဆိုရင် ရခိုင်စစ်ပွဲတွေကြောင့် ထွက်ပြေးနေရတဲ့ ရွာသားဒေသခံ ခုနှစ်သောင်းဝန်းကျင် ရှိနေပါပြီး ဒီလိုဖြစ်တာဟာ နှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့တွေက ရွာတွေကို အခြေပြုပြီး လှုပ်ရှားကြရတဲ့အတွက် ဖြစ်တယ်လို့ ဒေသခံ တွေ
ရသေ့တောင်မြို့နယ် ပြိန်းတော ကုန်တန်းစာသင်ကျောင်းမှာ တပ်မတော်စခန်းချလို့ ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့လို့ ဒေသခံတွေ ပြော
ရခိုင်ပြည်နယ် မင်းပြားမှာ လေးမြို့မြစ်ကမ်းပြိုလို့ လူနေအိမ်တွေပျက်စီး
အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်နေ့က ရွာနားမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်တာကြောင့် စက်တပ်လှေနဲ့ ထွက်ပြေးတဲ့ မိသားစုတစ်စုဟာ လှေနစ်ခဲ့တဲ့အတွက် အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ် ကိုးတန်းကျောင်းသူနဲ့ သူမရဲ့ သုံးနှစ်အရွယ် မောင်တစ်ဦးတို့ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
လက္ကာရွာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လည်း ရွာသားတစ်ထောင်ကျော်ဟာ ရွာကို စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြသလို အိမ်တစ်ချို့လည်း မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်မှာဆိုရင်လည်း သရက်ပြင် ၊ နွားရုံတောင်၊ စံဂိုးထောင်၊ ဥယျာဉ်သာ စတဲ့ ကျေးရွာ တွေမှာ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ရွာကို စွန့်ခွာထွက်ပြေးကြတဲ့အတွက် ရွာတွေဟာ လူမရှိဘဲ ဖြစ်နေကြရပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ဒီဇင်ဘာလ က စပြီး ဒီကနေ့ထိ အရပ်သားထိခိုက်သေဆုံးမှုက ၈၀ ကျော်ရှိသွားပြီ ဖြစ်ပြီး ဒဏ်ရာရသူကလည်း တစ်ရာကျော်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဥပဒေကျောင်းသားများ လူ့အခွင့်အရေး ဘာသာရပ်ကို မသင်မနေရ သင်ကြားရ
မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းလုံးမှာရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်တွေက ဥပဒေဘာသာရပ်တွေကို အထူးပြု တက်ရောက်နေတဲ့ ကျောင်းသားအားလုံးဟာ တတိယနှစ် (ဘွဲ့ကြို)မှာ လူ့အခွင့်အရေး ဘာသာရပ်ကို ဒီနှစ်ပညာသင်နှစ်က စပြီး မသင်မနေရ သင်ကြားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလူ့အခွင့်အရေး ဘာသာရပ် သင်ကြားတာကို ဒိန်းမတ်အစိုးရနဲ့ မြန်မာအစိုးရအကြား နှစ်နိုင်ငံ သဘောတူညီချက်အရ ဒိန်းမတ် လူ့အခွင့်အရေး အင်စတီကျု့ DIHR ရဲ့ အကူအညီနဲ့ ဆောင်ရွက်နေတာ ဖြစ်တယ်လို့ ရန်ကုန် အရှေ့ပိုင်း တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ်ဒေါက်တာ ကျော်ကျော်ခေါင် ကဆိုပါတယ်။
ဒီဘာသာရပ် စတင်သင်ကြားဖို့ ဆောင်ရွက်စဉ်ကတော့ ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်နဲ့ ဒဂုံတက္ကသိုလ် နှစ်ခုထဲက ဥပဒေအထူးပြု တတိယနှစ် ကျောင်းသားတွေကိုသာ သင်ခဲ့ပေမယ့် ဒီနှစ် ပညာသင်နှစ်က စပြီး တစ်နိုင်လုံး အတိုင်းအတာနဲ့ သင်ကြားပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
တက္ကသိုလ် အတုမှာ ကျောင်းတက်ဖို့ စာရင်းသွင်းတဲ့ အိန္ဒိယ ကျောင်းသားတွေကို အမေရိကန် ဖမ်းဆီး
ဘာကြောင့် တက္ကသိုလ် ဝင်တန်းမှာ စိတ်ကြိုက်မြန်မာစာ အတွဲ ယူတဲ့သူ နည်းတာလဲ
ဂျပန်က မြန်မာကို လူသိရှင်ကြား အပြစ်တင်သင့်ဟု HRW ပြော
ဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့ မြန်မာကို လူသိရှင်ကြား အပြစ်တင်အရေးယူမှုတွေ လုပ်သင့် တယ်လို့ လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့ (HRW) က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
သူတို့အဆိုအရ ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ တခြားလူနည်းစု တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ် တပ်မတော်က ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ လုပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ခဲ့ပြီး ဒါတွေအတွက် မြန်မာအစိုးရ ကိုဖိအားပေးစေလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူနည်းစုကို ထိခိုက်နစ်နာစေတဲ့ ဒါမှမဟုတ် တပ်မတော်ကို အကျိုးအမြတ်ဖြစ်ထွန်းစေနိုင်တဲ့ ဂျပန်ရဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှန်သမျှကိုလည်း တွန်းအားမပေးသင့်ဘူးလို့ HRW က ပြောပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်နေ့မှာ ဂျပန်ဧကရာဇ် မင်းကြီး နန်းတက်ပွဲကို နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံဟာ အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်နေ့မှာ တိုကျိုမြို့မှာ ဂျက်ထရို ခေါ် ဂျပန်ပြည်ပကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့ရဲ့ ကြီးမှူးကျင်းပမယ့် ညီလာခံမှာ မြန်မာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ စီးပွားရေး အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မိန့်ခွန်းကို ပြောကြားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီခရီးစဉ်မှာပဲ မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်စီးပွား အသင်းချုပ် UMFCCI အဖွဲ့ဝင် ၁၀ ယောက်က ဂျပန်နိုင်ငံ Jetro ဂျက်ထရို ဖိတ်ကြားချက်နဲ့ နှစ်နိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ အရပ်သားတွေသေဆုံးမှုတိုးလာတဲ့ ရခိုင်တိုက်ပွဲ အပါအဝင် မနက်ခင်းသတင်းများ